RIKOOOO MD11 KANYE 777 kokushayeka
Umbuzo RIKOOOO MD11 KANYE 777 kokushayeka
unyaka 1 7 edlule #599 by suythe
Ngisebenzise i-Rikooo A330 ne-amazingl yayo, kodwa muva nje ngazama ezinye imikhiqizo efana ne-MD-11 ne-777
Lezo zimikhiqizo ziyaqhubeka ziphazamiseka uma zihamba. Uma ngenza amanye ama-manuveors i-P3D izoshayeka.
Ngithemba ukuthola isixazululo kulokhu.
unyaka 1 7 edlule #600 by Dariussssss
Sawubona futhi wamukeleke ku-Rikoooo.
Ngangisebenzisa nabo bonke ku-FSX, ngaphandle kwenkinga. Kufanele uqiniseke ukuthi izindiza ozisebenzisayo ziyahambisana ne-P3D yakho. Uma uvula ikhasi, ake sithi-MD-11, uzobona lokhu: Ku-FSX & FSX-Steam & Prepar3D v1 (v2 & 3 ukuhlola), ngakho kufanele uqiniseke ukuthi iyahambisana.
Njengoba nje kuthi, i-v2 ne-V3 ukuhlola, amaphutha kungenzeka.
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: suythe